Your Vote 2015
DVB TV News
မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်က ဟာသလူရွှင်တော် အဖွဲ့ပေါင်းများစွာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ထားသော အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် ကျင်းပခဲ့သော လူရွှင်တော်ပြိုင်ပွဲများအတွင်း တဖွဲ့ချင်းစီက အပြိုင်အဆိုင် တင်ဆက်သော ရယ်စရာ ရွှင်စရာ ဟားစရာ သောစရာ ဟာသပျက်လုံးများကို (အုပ်စုပွဲစဉ်မှ နောက်ဆုံး ဗိုလ်လုပွဲစဉ်အထိ) တင်ဆက်ပေးထားသည့် အစီအစဉ် ဖြစ်သည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်အငြိမ့်အဖွဲ့များနှင့် မိတ်ဆက် (၃) (စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃)
565 April 2, 2015
ပြိုင်ပွဲဝင်အငြိမ့်အဖွဲ့များနှင့် မိတ်ဆက် (၃) (စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃) နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် Sky Net တံခွန်စိုက်အငြိမ့်ပြိုင်ပွဲမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် အငြိမ့်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပရိသတ်မိတ်ဆက် အပိုင်း (၃) ပါ။ အခုအစီအစဉ်မှာ — – ငါးရောင်ခြယ် – ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အဖွဲ့ တွေရဲ့မိတ်ဆက်စကားတွေ ကြည့်ရှုကြရပါမယ်။
ပြိုင်ပွဲဝင်အငြိမ့်အဖွဲ့များနှင့် မိတ်ဆက် (၂) (စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃)
557 April 2, 2015
ပြိုင်ပွဲဝင်အငြိမ့်အဖွဲ့များနှင့် မိတ်ဆက် (၂) (စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃) နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် Skynet တံခွန်စိုက်အငြိမ့်ပြိုင်ပွဲမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် အငြိမ့်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပရိသတ်မိတ်ဆက် အပိုင်း (၂)ပါ။ ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ ကုမုဒြာ ဒီစတား သက်တန့် ရောင်စဉ် အဖွဲ့ တွေရဲ့မိတ်ဆက်တွေကို ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲဝင်အငြိမ့်အဖွဲ့ များနှင့်မိတ်ဆက် (၁) (စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃)
609 April 2, 2015
ပြိုင်ပွဲဝင်အငြိမ့်အဖွဲ့ များနှင့်မိတ်ဆက် (၁) နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် Skynet တံခွန်စိုက်အငြိမ့်ပြိုင်ပွဲမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် အငြိမ့်အဖွဲ့ များနှင့် ပရိသတ်မိတ်ဆက် အပိုင်း (၁)ပါ။ ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမယ့် အဖွဲ့ တွေကတော့ – မြန်မာပြည်စတား၊ – ဟာသလုလင် နဲ့– ရွှေမြင့်မိုရ် အငြိမ့် အဖွဲ့ တွေပါ။ ကျန်နေတဲ့အဖွဲ့ တွေနဲ့ဆက်လက် မိတ်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲတော် SKY NET တံခွန်စိုက်အငြိမ့်ပြိုင်ပွဲ (စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃)
626 April 2, 2015
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲတော် skynet တံခွန်စိုက်အငြိမ့်ပြိုင်ပွဲ စက်တင်ဘာလ ၂၁ရက်နေ.မှာ ကျရောက်မယ်နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ စကိုင်းနက်(Sky Net) တံခွန်စိုက် အငြိမ်.ပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပပမှာဖြစ်ကြောင်း စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကို House of Media and Entertainment မှာကျင်းပပါတယ်။ အဲဒီအငြိမ်.ပြိုင်ပွဲကို စက်တင်ဘာလ ၁၆ – ၁၇- ၁၈ ရက်တွေမှာ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်အငြိမ့် ၁၅ဖွဲ. ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာပါ။ စက်တင်ဘာလ ၂၁ရက်နေ.မှာတော့ ဆုရရှိတဲ. အငြိမ့်တွေကို ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပြီး လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေအတွက် ၀င်ကြေးကိုတော့အခမဲ့ လို. သက်မှတ်ထားပါတယ်။ နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနေ. အထိမ်းအမှတ်အတွက် အခုလိုအငြိမ့်ပြိုင်ပွဲပြုလုပ်တာဟာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်
© 2020 DVB TV News.